Seranam-piaramanidina atsimo andrefana: manafina ny olana momba ny fanarahan-dalàna izahay amin'ny alàlan'ny Fanahy mpiady
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Seranam-piaramanidina atsimo andrefana: manafina ny olana momba ny fanarahan-dalàna izahay amin'ny alàlan'ny Fanahy mpiady
Just yesterday, eTurboNews nitatitra momba Boeing tsy miteny intsony ny fanontaniana fiarovana rehefa manidina amin'ny Southwest Airlines Boeing 737-800 mankany Honolulu.
Androany, ny filohan'ny sendikan'ny mpiasa ao Amerika, John Samuelsen, dia naneho hevitra tamin'ny tatitra momba ny baomba nataon'ny CBS Morning News izay niresahan'ny teknisianina mpikarakara fiaramanidina ny faneren'ny mpitantana mba hanakona ireo olana lehibe momba ny fikojakojana, mametraka loza mitatao ho an'ny daholobe misidina sy ny ekipa mpandeha. .
Ny taratasy ho an'ny Southwest Airlines dia mivaky toy izao:
Ny Union Workers Union of America ("TWU") dia misolo tena ny mpiasa manodidina ny 30,000 ao amin'ny Southwest Airlines, ao anatin'izany ny 16,000 Flight Attendants.
Tsy hijoro fotsiny ny TWU ary hamela ny Southwest Airlines hametraka ireo Mpanotrona antsika ho tandindomin-doza.
Araka ny efa fantatrao, tato anatin'ny andro vitsivitsy dia nandefa andian-tatitra momba ny faneriterena ireo Teknisiana mpikarakara ny fiaramanidina Southwest Airlines ny AirSchistis Fraternal Association (AMFA).
Ny TWU dia mijoro mifanila amin'i AMFA.
Izy ireo no olona manome antoka ny fiarovana ny ekipanay sy ny mpandeha an'habakabaka. Naharikoriko ahy manokana sy matihanina ny fanehoan-kevitry ny filoha lefitra atsimo andrefan'ny Maintenance Operations, Landon Nitschke ao amin'ny tantara CBS. Nofaritany ny kolontsaina fikojakojana an'i Southwest amin'ireto teny manelingelina ireto:
“Ary, fantatrareo ve, indraindray dia manafina ny olana momba ny fanarahan-dalàna isika eo ambanin'ny Fanahy mpiady, marina?”
Ny faneken'ny orinasa anao fa manafina ny tsy fahombiazan'ny fanarahan-dalàna ianao dia tena manelingelina sy fahafaham-baraka tanteraka.
Vao mainka nampikorontan-tsaina sy nahamenatra kokoa aza ilay valiny sy valiny fanilihana nomen'ny mpitantana Southwest momba ny fihetsiky ny orinasa manoloana ny fiarovana. Southwest Airlines dia efa manana laza malaza noho izy manana mekanika vitsy an'isa isaky ny fiaramanidina.
Mba hanaratsiana ratra dia izao ianao dia mitaky ny zonao hanana asa bebe kokoa amin'ny fikarakarana fiaramanidina ho any ivelany, izay azo antoka fa tsy azo antoka. Fotoana izao hanehoan'ny Southwest Airlines fanajana ny Teknisin'izy ireo amin'ny fikarakarana fiaramanidina amin'ny alàlan'ny fanomezana fifanarahana ara-drariny azy ireo izay miaro ny fiarovana ny mpandeha an'habakabaka sy ny TWU Flight Attendants.
Ny fiezahana hiala ny sisin-tany amin'ny fikojakojana sy fanamboarana ny fiaramanidina atsimo andrefana dia tsy tehamaina fotsiny amin'ny mpiasao sy ny mpanjifanao.
Filoham-pirenena, Union Workers Union of America
Fampirantiana lehibe momba ny tarehimarika mahomby Avaratra dia mihetsika ampahibemaso
Loza iray mazava sy misy ankehitriny ho an'ny mpanjifa American Airlines